Magaca iPhone-ka cusub ee 11 ayaa lagu xantaa: IPhone Pro | Wararka IPhone
Toni Cortés | | iPhone, dhowr
Magaca iPhone-ka cusub ee 11 ayaa lagu xantaa: IPhone Pro. Isticmaalaha twitter-ka ee aan la aqoon ayaa qoray in magaca ganacsiga ee cusub ee iPhone 11 Taasi waxay soo bixi doontaa toddobaadyo yar gudahood waxay noqon doontaa iPhone Pro.
Isticmaalahan, CoinX, sidaas ayuu u xaqiijiyaa. Weli waa xan, laakiin miisaan leh. Isla xisaabtan twitter si qarsoodi ah u faahfaahiyay faahfaahinta dhabta ah ee ku saabsan iPhone XS maalmo ka hor intaan la bilaabin.
CoinX, ayaa faafiyay magaca iPhone XS, iPhone XS Max iyo iPhone XR toddobaad ka hor kulankiisii ​​ugu horreeyay. Wuxuu sidoo kale tilmaamay culeyska saxda ah ee XS Max, gidaarka gidaarka, iyo xitaa qaabeynta asymmetrical ee daloolinta godadka ay soo bandhigto khadka iPhone XS, waxna ugama badna
Si kastaba ha noqotee, daadadkan ugu dambeeyay, CoinX ma cadeeyo magaca si sax ah. Waa wax mugdi ku jiro oo Apple waxay u isticmaali kartaa magaca dambe "Pro" siyaabo kala duwan.
Waxaa jiri kara saf cusub oo saf ah, marka XR-da cusub wuxuu noqon karaa kaliya "iPhone" iyo kamarad saddex-laab ah iPhone 11 oo ah "iPhone Pro." Ama Apple ayaa horay u sii wadi kara lambar oo iyaga ugu yeeri kartaa "iPhone 11" iyo "iPhone 11 Pro." Waxaa laga yaabaa oo kaliya beddelka 6.5-inji iPhone XS Max inuu helo magaca 'Pro.'
Sikastaba xaalku ha ahaadee, tani waxay noqoneysaa markii ugu horeysay ee Apple ay u isticmaasho magaca "Pro" aaladaha telefoonadooda.. Laakiin waxay noqon laheyd mid caqli gal ah, maxaa yeelay inta kale ee khadadka wax soo saarka, labada iPad, MacBook iyo iMac waxay u muuqdaan "Pro" inay yihiin Top of range.
Marka laga hadlayo astaamaha "Xirfadlayaal", waxaan wax ka ognahay sida ay u ekaan doonto noocyadan cusub Waxay si weyn ugu egtahay iPhone XS marka la eego naqshadeynta dibedda. Waxay lahaan doontaa buul gadaal muran leh oo isku dhafan oo ku dari doona muraayad saddexaad oo ballaadhan oo ballaadhan. Muraayadda dambe waxay yeelan doontaa cufan cusub oo matte ah.
Marka laga reebo kaamirooyinka cusub, waxay ku dari doontaa anteenooyin cusub si loogu helo meelaynta saxda ah ee gudaha, mashiinka cusub ee 13nm A7 iyo lacag-bixinta wireless-ka ee labada dhinac, si aad awood ugu yeelatid AirPod-yada dhabarka iPhone-ka.
Midkoodna astaamahan cusubi maahan inay sabab u noqdaan magaca "Pro". Ama haa waa laga yaabaa. Xaqiiqdii, moodooyinka ugu badan ee loo yaqaan 'MacBook Pro' waa buugaagta xusuus-qorka ee caadiga ah, waa si fudud hab lagu kala-sooci karo heerka aasaasiga ah, "Hawada".
Wax yar ayaa laga hayaa in la ogaado haddii CoinX uu sax yahay.
Wadada buuxda ee maqaalka: Wararka IPhone » iPhone » dhowr » Magaca iPhone-ka cusub ee 11 ayaa lagu xantaa: IPhone Pro